Goorma ayuu bilaabmaa maandooriye? - Hay'adda Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Goorma ayuu bilaabmaa maandooriye?
Gary Wilson wuxuu dhigayaa su'aasha cad ee ku saabsan qabatinka sigaarka: "Immisa ayaa aad u badan?" ku saabsan Yourbrainonporn.com degel Waxa uu xusay in su'aashani ay u maleyneyso in saameynta porno ay tahay mid laba-gees ah. Taasi waa, ama adigu wax dhibaato ah ma lihid, ama waxaad tahay qof balwad leh. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada maskaxda ee maskaxda ku dhaca ayaa ku dhaca muuqaalka. Kaliya looma kala saari karo inay yihiin madow iyo caddaan. Iyagu kaliya maahan ama / ama. Weydiinta halka qofku ka gudbo xariiqda ayaa iska indhatiraya mabda'a neuroplasticity. Maskaxdu had iyo jeer waxay barataa, bedeshaa oo la qabsataa jawaabta deegaanka.
Kicinta dheeraadka ah
Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in xitaa qadar yar oo ah kicinta dareen-celinta ah ay si dhaqso ah u bedeli karto maskaxda iyo dhaqanka beddelaadda.
Tusaale ahaan, waxay qaadatay maalmaha 5 ee kaliya u dareen xasaasiyad calaamadeysan ciyaaraha fiidiyowga ee dhalinyarada waaweyn ee caafimaadka qaba. Ciyaartoydu ma ahan kuwo la qabatimay, laakiin dhaqdhaqaaqa maskaxda oo sareeya oo la jaanqaadaya rabitaankooda shakhsi ahaaneed ee ay ku ciyaaraan. Midkale tijaabada, ku dhowaad dhammaan jiirka oo la siiyay helitaan aan xadidnayn oo ah "cuntada kafateeriyada" oo u roon cayil. Waxay qaadatay dhowr maalmood oo kaliya in lagu cuno cunnooyinka qashinka ah ee loo yaqaan 'receptors dopamine' si ay hoos ugu dhacdo. Tani waxay hoos u dhigtay qanacsanaantii ay ka qabeen cunista. Qanacsanaan yar ayaa jiirkii u horseeday in ay aad u sii dheecaan badan.
Sida porn internet, tan Daraasada Jarmalka Machadka Max Planck ee sharafka leh wuxuu eegay ragga oo ahaa kuwa isticmaala dhexdhexaadka ah ee lulay. Waxaa laga helaa isbeddel maskaxeed oo ku xiran maskaxda. Nusqaha badan ee ay ku wada baabba'een, xiriirka waxtarka leh ee yar wuxuu jiray inta u dhaxaysa fikirka iyo dareenka maskaxda ee maskaxda. Isla mar ahaantaana waxaa jiray xayeysiin yar oo maskaxeed oo laaluush ah, lebbiska badan ee ay cunayaan. Tani waa calaamad caadi ah oo ah shakisid marka qofku u isticmaalo heer heer sare ah. Wakhti ka dib waxay u baahan yihiin waxyaabo naxdin leh ama walxaha maqaarka ah si ay u noqdaan kuwo kacsan.
An Daraasad talyaani ah waxay ogaatay in 16% ardayda da 'yarta ah ee qaata porn ka badan toddobaadkii hal mar inay la kulmaan rabitaan galmo aan caadi ahayn. Is barbar dhigo in 0% dadka isticmaala curyaanka oo aan sheegin rabitaanka galmada.
Dhibaatooyinka aan lahayn takoorka
La qabsiga waa in cabsida aan loo baahneyn isbeddel maskaxeed oo weyn ama saameyn taban.
Si fudud u dhig, cabsida galmada, dareen-celinta, dabeecadda iyo isbedelka maskaxda ee kale ee la xiriira isticmaalka maskaxda, waxay ku dhacdaa muuqaal. Sidoo kale garaw in maskaxdeenna si joogto ah wax u baranayo oo u waafajin kara deegaanka. Muuqaalka internetku waa kicin kicin ah. Waxay bartilmaameedsaneysaa wareegyadaada galmada, waxay maskaxda ku dhigtaa oo waxay bedeshaa aragtida.
Haddii aad rabto inaad sahamiso cilmi-baarista xiriirka u dhexeeya isticmaalka sigaarka iyo walaaca bulshada, guji halkan. Kani wuxuu kuu qaadayaa goob dibedda ah wuxuuna ka furmayaa daaqad cusub.
Caawinaad Helid >>